विस्तृत शान्तिसम्झौताको ११ वर्ष पुरा, : के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ? – Everest Dainik – News from Nepal
विस्तृत शान्तिसम्झौताको ११ वर्ष पुरा, : के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?
३८ अर्बको भौतिक संरचनाको क्षति, साढे १३ अर्बको पुनर्निर्माण
काठमाडौं, मंसिर ५ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको मंगलबार ११ वर्ष पूरा भएको छ ।
५ मंसिर ०६३ मा मा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । त्यससँगै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो । विस्तृत शान्तिसम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका सबै काममा खासै प्रगति भएको छैन ।
संविधान निर्माण प्रक्रियाको सञ्जालमा जेलिएको शान्तिप्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन । द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
ट्याग्स: cmprachanda, girijaprasad koirala, shanti samjhauta